အိပ်မက်အိမ်: ပြည်ပအလုပ်အကိုင် နှင့်မြန်မာအမျိုးသမီးများ (မလေးရှား အမြင်)
ပြည်ပအလုပ်အကိုင် နှင့်မြန်မာအမျိုးသမီးများ (မလေးရှား အမြင်)
ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာ၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်မှု သည် ယနေ့ဖွဲ့ ဖြိုးစ နိုင်ငံများ နှင့်ဖွံ့ ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ ၊ အထူးသဖြင့်ငွေကြေးတန်ဖိုး ကွာဟမှုရှိသော နိုင်ငံများ အတွက် အဓိက ထွက်ပေါက်တစ်ခု အဖြစ် မျှော်လင့် ရသော ခေတ်ကပေးတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်နေပါတော့သည်။
ယနေ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည် ပြည်ပသို့ထွက်၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်မှု အများဆုံး နိုင်ငံအဖြစ် ရပ်တည်နေခြင်းကား ယင်း၏ ပြယုဒ်တစ်ခုပင် ဖြစ်နေပါတော့ သည်။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရော . . . ?
ခါတော်မှီ ရောဂါတစ်ခု အဖြစ် တည်ရှိနေဆဲပါ ။ ကျွန်တော် အပါအ၀င် ပြည်ပ၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကား အများအပြား ရှိနေဆဲပါ ။ အခြားနိုင်ငံများ၏ အခြေအနေတော့မသိရပါဘူး ။ မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ယနေ့ အခြေအနေ ကတော့အချို့ လည်း အဆင်ပြေကြပါတယ် ။ အချို့ လည်း အဆင်မပြေကြပါဘူး ။ သို့ ပေမယ့်စာချုပ်အရ လက်မှတ်ထိုးထား ရပြီးဖြစ်ကဖြင့်အဆင်ပြေအောင် ကြိုးစားလုပ်နေကြရသူများလည်း ရှိနေဆဲပါ ။
အေးဂျင့်(ပွဲစား) တို့ ရဲ့အဆင်ပြေသလို နေရာချထားမှု ကြောင့် လည်း အလုပ်ခေါ်ယူသော နေရာနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရသော နေရာ တစ်ချို့ ဆို လားလားမှ မသက်ဆိုင်ဘဲ လုပ်ကိုင်နေကြရပါတယ် ။
ဒါက . . . အမျိုးသားများ ရဲ့အခက်အခဲဘဲ ရှိပါသေးတယ် ။
အမျိုးသမီး များ အတွက်ရော . . . ?
အဖြေရ တော်တော်ကြပ်လိမ့် မယ် ထင်ပါရဲ့ ဗျာ . . . ။ ယောင်္ကျားကြီးတွေ တန်ပေမယ့်တစ်ချို့အခက်အခဲတွေ တွေ့လွန်းလို့ပြန်ပြေးကြသူတွေလည်း မနည်း ။ တစ်ချို့လခ နဲ့အခွန် အကြားမှာ ပွဲစားရဲ့လုပ်စားမှုနဲ့သူဌေးက လခကို စာချုပ်အတိုင်းပေး . . . ။ အဲဒီမှာ ခက်ရတာက အလုပ်ခေါ်ယူတုန်းက လခက ပျမ်းမျှ (၇၅၀ ရင်းဂစ်) ၊ နေရေး ၊ စားရေး စီစဉ်ပေးမယ်ပေါ့။ ရောက်တော့နေရေးတော့စီစဉ်ပေးရဲ့ရေလခ ၊ မီးလခပေး . . . စားဖို့ တော့ဆန်၊ဆီ စီစဉ်ပေး ကိုယ့် ဖာသာချက်စား . . . ဒါတောင် တော်တော် ကံကောင်းတဲ့ သူတွေနော် ။
ပျမ်းမျှ . . . .
လခ ....................... ၇၅၀
နေရေး ၊ စားရေး .......၁၅၀(-) (အတော်လေး ချွေတာရင်)
ပါမစ်ကြေး(အခွန်)......၁၅၀(-) (မလေးရှား နိုင်ငံ အတွက်ပဲနော် ၊ မြန်မာပြည်က အခွန်ကိစ္စ မပါသေးဘူး ။ )
ကဲ .. လက်ကျန် . . . ၄၅၀ (ပျမ်းမျှနော် )
ကံမကောင်းတဲ့သူတွေကရော . . .
တချို့ ဆို အေးဂျင့် က ဖြတ်စားလို့(၃) လ ၊ (၄) လ လောက်ကြာမှ လခ ရသူကရ ။ အခက်အခဲတွေ ကို ရောက်ရောက်ခြင်း ဘယ်လိုဖြေရှင်း ကြမှာလဲ ။ သိကြွမ်းတဲ့သူတွေကို အကူအညီတောင်း ၊ ဟိုလူ ကူပါ။ ဒီလူကူပါ . . . နဲ့အကူညီတောင်းရသူတွေလည်း မနည်းကြပါဘူး ။
ဥပဒေဘောင် အတွင်းက ကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့ အစည်းတွေ ရှိပါရဲ့ဘယ်လိုလုပ် ဆက်သွယ်ရမှလဲ မသိနိုင် ။ အခက်အခဲတွေက ခပ်များများရယ် ။
အမျိုးသမီးများကရော . . . ?
အခက်အခဲတွေ အကြားမှာ ကျွန်တော့်အစ်မတွေ ၊ ညီမတွေကို လမ်းလွဲသွားမှာ စိုးရိမ်ရဲ့ ဗျာ . . . ။
ကျွန်တော်ဒီရက်မှာ သတင်းတစ်ခု ကြားမိတာ ကြာပါပြီ ။ မြန်မာနိုင်ငံ က အမျိုးသမီးတွေ တော်တော်များများ ဒီရက်ပိုင်းမှာ မလေးရှား လာကြတယ်တဲ့။ နောက် စိတ်မကောင်းစရာ ကြားလိုက်ရပါရဲ့တချို့အဆင်မပြေကြဘူး ။ ကဲ . . . ဘယ်လို လုပ်ပေးကြမှာလဲ
ကျွန်တော် ပြောတဲ့အကြောင်းလေးတွေကို ဖြစ်နိုင်ရင် လိုက်ပြီး တက်(ပ်) ကလေးကို ခါတော်မှီ လေး ဖြစ်ဖြစ် ရေးပေးကြပါလား။ ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန်လေးတွေနဲ့နောက်လာမယ့်အမျိုးသမီးလေး များကို ပညာပေးစေချင်လို့ ပါ . . . ။
ကျွန်တော်မိုးစွေ မနေ့ တနေ့ ကမှ ဘလောဒ့်စရေးကြည့်တာပါ ။ အမှားများပါရင်လည်း ခွင့် လွှတ်ကြပါ ။ ၀ိုင်းဝန်းလည်း တက်(ပ်) ပေးကြပါလို့. . . ။
လက်ရှိအခက်အခဲ ရှိနေသူများ ကျွန်တော်ကို ဆက်သွယ် နိုင်ကြပါတယ် ။ နှုတ်၏ဆောင်မခြင်းဖြင့်အခက်အခဲအချို့ကို ဥပဒေဘောင် အတွင်းမှ ကူညီပေးမည့် အဖွဲ့ အစည်းများနှင့်ဆက်သွယ်ပေးပါရစေ . . .
တယ်လီဖုန်း +(၆၀၁၄) ၆၂၀ ၄၆၄၂
Labels: မိုးစွေ, အတွေး အမြင်, အတွေ့အကြုံ